January 8, 2020 - ThutaSone
သင်္ဘေင်္ာသီး စားလျှင် ဆေးအဖြစ် ဒီလို အကျိုးပြုအောင်စားပါ
January 8, 2020 ThutaSone 0
သင်္ဘေင်္ာသီးကို ဒီလိုဆေးအဖြစ်စားသုံးလို့ရတာ သိပြီးကြပြီလား နံနက် ၈ နာရီ စားသုံးလျှင် – အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း အတွက် ကောင်းမွန် ပါသည်။ နံနက် ၉ နာရီ စားသုံးလျှင် – သွေးအဆိပ်ဖြစ်ခြင်းကို ကောင်းမွန်သည်။ သွေးသားကို သန့်စင် စေသည်။ နံနက် ၁၀ […]
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လုပ်မယ်ဆို အကျိုးထူးမှာပါ….ပိတ်နေတဲ့လာဘ်ပွင့်စေတဲ့ ရှင်သီဝလိလာဘ်ပွင့်ဂါထာ
ငွေ ကြေးဥစ္စာတွေမဝင်ဘဲ လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်နေသူတွေအတွက် တကယ်စွမ်းတဲ့ လာဘ်ပွင့်ဂါထာတစ်ပုဒ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ဒီထဲကအတိုင်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရင်း ဂါထာတော်ကို ရွတ်ပေးမယ်ဆိုရင် လာဘ်တွေပိတ်နေတာတွေ ပွင့်ပြီး လာဘ်ပွင့် ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ် ပထမဆုံးလုပ်ရမဲ့ နည်းကတော့ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ကို သနချေ သိဒ္ဓိတင် ဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ပြီးပါက ရှင်သီဝလိ ဂါထာကို […]
တစ်ပြည်လုံးအနှံ့ မိုးရွာသွန်းနိုင်ဟု မိုးဇလ ထုတ်ပြန်….
တစ်ပြည်လုံးအနှံ့ မိုးရွာသွန်းနိုင်ဟု မိုးဇလ ထုတ်ပြန် လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ဆယ်ရက်ပတ်အတွင်း တပြည်လုံးအနှံ့ မိုးရွာနိုင်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရွာသွန်းမြဲထက် ပိုရွာနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ဒုတိယ ၁၀ ရက်ပတ်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရွာသွန်းမြဲထက် ပိုနိုင်ပြီး၊ နေပြည်တော်၊ […]
ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တစ်ထောင်တန်ကို မြင်တော့ နစ် ၄၀ ကစုထားတဲ့ ငွေစက္ကူလေးတွေထုတ်ပြတဲ့အဖွား (အံ့ဩလို့မဆုံးဘူး)
ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တစ်ထောင်တန်ကို မြင်တော့ နစ် ၄၀ ကစုထားတဲ့ ငွေစက္ကူလေးတွေထုတ်ပြတဲ့အဖွား (အံ့ဩလို့မဆုံးဘူး) ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံငွေစက္ကူရလို့ အဖွားကိုပြန်ပြတာ အဖွားက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(၄၀)ကစုထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူလေးတွေထုတ်ပြတယ်။ ၅ ကျပ်တန် – ၉၇၀ ကျပ်/ ၁၀ ကျပ်တန်-၁၄၇၀ ကျပ် ငွေစက္ကူကိုမသုံးရက်ပဲစုထားတဲ့အဖွားကို […]
အီရန်ကို တိုက်ဖို့ သမ္မတအမိန့်ကို လေတပ် ၊ ရေတပ် ၊ ကြည်းတပ် အားလုံးက အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီ…
အီရန်ကို တိုက်ဖို့ သမ္မတအမိန့်ကို လေတပ် ၊ ရေတပ် ၊ ကြည်းတပ် အားလုံးက အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီ ဒီကနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ အီရတ်မှာ စခန်းချထားတဲ့ အမေရိကန်လေတပ်စခန်းကို ဖျက်အားပြင်း ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည် ဒါဇင်လိုက်နဲ့ အီရန်ကနေ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက အီရန်နိုင်ငံရဲ့ စစ်တပ်အကြီးအကဲ ကာဆမ်ဆူလေမာနီကို […]
မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ မင်းသားချော ထူးအောင်က ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ် အားပေးမှုကို ရရှိထားသူပါ။ ထူးအောင်က ရုပ်ရည်ချောမောရုံသာမက အရည်အချင်းလည်းရှိတဲ့ မင်းသားတစ်လက်မို့ အနုပဘာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာ အခိုင်အမာ ရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထူးအောင်က သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အားကစားလေ့ကျင့်ရေးခန်းမကြီးလည်း […]
အမေရိကန်” B-2 နျူးကလီးယား ဗုံးကြဲလေယာဉ်” ဟာဝိုင်အီလေတပ်စခန်းက စတင်ထွက်ခွာ…
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ စစ်ရေးတင်းမှာနေတဲ့အချိန် အမေရိကန် B-2 နျူးကလီးယား ဗုံးကြဲလေယာဉ် ဟာဝိုင်အီလေတပ်စခန်းစကနေ စတင်ထွက်ခွာလာတယ်လို့ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းဌာနတွေကနေ သတင်းတက်လာပါတယ်။ ဒီ B-2 ကမ္ဘာပေါ်ရှိမဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များတွင် တန်းကြေးအမြင့်ဆုံး ဒီဇိုင်းလက်ရာအကောင်းမွန်ဆုံးကိုပြပါဆိုလျှင်USရဲ့B-2ကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါB-2ကို USရဲ့နာမည်ကျော်လေယာဉ်ဒီဇိုင်းပညာရှင် ဂျက်နိထရော့ပ်က ရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီ Northrop Grummanကုမ္မဏီမှ 1989ခုနှစ်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ B-2ရဲ့ကိုယ်ထည်ကို တိုက်တေနီယံသတ္တုများဖြင့်တည်ဆောက်ထားကာ […]
တောမီးကြားထဲမှာ မီးလုံးဝ လောင်ကျွမ်း ခြင်းမရှိပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်းသစ်တွေနဲ့ ဆောက် လုပ်ထားတဲ့ ”ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်း”…
ဩစတေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့တောထဲမှတောမီးကြားထဲမှာ မီးလုံးဝ လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်းသစ်တွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း The Thai temple churches are in the midst ofafire in Sydney but are not miraculously […]
ယူကရိန်း လေယာဉ်ပျက်ကျမှု လိုက်ပါသွားသူအားလုံး သေဆုံး
ယူကရိန်း လေယာဉ်ပျက်ကျမှု လိုက်ပါသွားသူအားလုံး သေဆုံး ယူကရိန်း ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစ်စင်း ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က အီရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက် လေယာဉ်ပေါ်ပါ လိုက်ပါသွားသည့် လေယာဉ် အမှုထမ်းနှင့် ခရီးသည် ၁၇၀ ဦးစလုံး သေဆုံးပြီဟု အီရန် ကြက်ခြေနီ တပ်ဖွဲ့က […]
အိမ်ထောင်မှု သာယာတယ်၊ စီးပွားလည်းတက်တယ်ဆိုတာ အိမ်တစ်အိမ် စီးပွားတက်ဖို့ယတာချေနေဖို့ မလိုဘူးတဲ့ …
အ ရမ်းေ ကာင်းလိုက်တဲ့ စာလေးဗျာ။ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောကဆိုင် ပိုင်ရှင် ကိုဇော်မိုးပြောပြတဲ့ အိမ်တစ်အိမ် စီးပွားတက်ဖို့ယတာချေနေဖို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စကား အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ၊ ဖတ်ကြည့်ပါလ င်နှင့် မ ယားချစ်ကြင်ငြားစီးပွားတက်မည်သာ…. စီး ပွား တက် ချင်ရင် လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ရန်ဖြစ်ရင် […]